DAAWO: Kalluumaysato la kulantay NAXDINTII ugu waynayd (Sidee wax u dheceen?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Kalluumaysato la kulantay NAXDINTII ugu waynayd (Sidee wax u dheceen?)
DAAWO: Kalluumaysato la kulantay NAXDINTII ugu waynayd (Sidee wax u dheceen?)
(Monterey Bay) 22 Maajo 2019 – Dooni yar oo maraysey Gacanka Monterey ee dalkaasi Canada ayaa sibiq kaga baxsatay nibiri wayn oo isagoo iska ciyaaraya kasoo baxay meel in yar u jirto.
Nasiib wanaag, nibirigu uma soo seexanin dhanka doonida, iyadoo ay sidaasi dhici lahayd uu dhib wayni soo gaari lahaa doonida iyo nibiriga labadaba.
Waxaa sawirka qabtay Douglas Croft oo ah 60-jir jecel sawirrada dabeecadda aadna u daneeya xayawaanka qarada wayn ee nibiriga.
Xilliyada uu xagaagu soo hor yeesho ayaa waxaa Gacankan aad uga kalluumaysta doonyo jillaabta kalluunka qaaliga ah ee Salmon-ka, waxaa se kusoo beegma nibiriga oo isna ujeeddo taa la mid ah goobta uga quuta.
Hoos ka daawo muuqaalka…
Previous articleCaddaanka reer Norway oo Soomaalida u quuri waayay hal arrin (Daraasad cusub)
Next articleOil blocks: Kenya flexes muscle in row with Somalia